Iye zvino yako Apple Watch Series 3 inonyoresa zvinoitwa neSki uye Snowboard | Ndinobva mac
Iyo Apple Watch Series 3 ine mikana yakawanda kupfuura iyo yekutanga yapihwa. Kutenda kuhuwandu hwema sensors uye iyo GPS Chip iyo yakaverengerwa muChikamu 2, tinogona kutora ruzivo kubva kune yedu yemazuva ese kurovedza muviri. Kumhanya kunyange kushambira ibasa rinoitwa nemawatch emitambo mazhinji.
Nhasi taziva kuti iyo vhezheni yeWOSOS 4.2. Inosanganisira maAPIs matsva ekunyora ruzivo rwemitambo yechando. Vagadziri havana kutora nguva refu vachiuya uye zvinoshandiswa senge Materu, Snoww, squaw Alpine, Snocru uye Ski tracks, zvinoenderana neruzivo rwunounganidzwa neApple wachi mukumira kwakadzika, chinhambwe, huwandu hwekumhanya, avhareji kumhanya uye macalorie akatsva.
Iyo Series 3 ndiyo yega yekufambidzana ine altimeter, chinodikanwa chakakosha kurekodha materu emateru uye kuita zvakanyanya kuverenga.
Kunyangwe iyo API iri muWatchOS 4.2. inoshanda, izvo zvinoshandiswa zviri pamutemo hazvisanganise iyo data yakaunganidzwa mukudzidziswa kwechando. Ichokwadi kuti iyo Workout application inosanganisira iyo Snow Sports chikamu, asi haina kuitiswa.
Mukuenderana nezvimwe zvitoro zveApple, iyo kambani iri kugadzirira aya mabasa kuti asimudzirwe uye kuitwe nevechitatu mapato. Kukwidza, accelerometer uye zviyero zveGPS zvinounganidza dhata kuyera koriori kupfeka, kuburuka kana kumhanya, pakati pemamwe ma parameter. Iyo API nyowani inofunga nezvenguva yauri kukwira materu nekuda kweiyo altimeter uye kumhanya kwaunofamba.
Basa rakaunganidzwa rinoendeswa kune data reHealthKit uye rinokubatsira kupedzisa mhete dzekuita, sekunge kwaive kumwe kurovedza muviri. Uye zvakare, iko kunyorera kwakagadzirirwa kumbomira, kana ichiona kuti iwe uri mukumbomira, kuzorora kana kuita recharge.
Pakati pezita rezvishandiso zvinoshandisa iyo watchOS 4.2 API, tinoona kuti mune izvo zvinoshandiswa Materu uye Snoww, zvinowirirana neSiriKit. Naizvozvo, isu tinogona kupa rairo kuna Siri zvine chekuita nebasa ratiri kuita panguva iyoyo. Isu tinoshuvira kuti Apple icharamba ichiwedzera mashandiro kuApple Watch, sezvo kugona kwayo neGPS yakavakirwa uye altimeter ichibvumidza nyika yemikana
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Iye zvino yako Apple Watch Series 3 inorekodha Ski uye Snowboard chiitiko
Unoziva here kuti chii chinopisa makona mune macOS? Nhasi tinotsanangura izvo zvavari uye maitiro ekuzvigadzirisa